२ phrases वाक्यांशहरू गर्भावस्थामा पढ्न | स्वयं सहायता संसाधन
मारिया जोस रोल्डन | 10/05/2021 19:00 | वाक्यांशहरू
गर्भावस्था महिलाको जीवनको धेरै सुन्दर चरण हो। यो एक समय हो जब एक महिलाको जीवन पूर्ण रूपले परिवर्तन हुन्छ, गर्भवती हुनु अघिदेखि जब सम्म उनले बच्चा जन्माउँछिन् केही पनि समान हुँदैन। र जबकि, ती9महिनाको अवधिमा, रमाइलो गर्ने समय भयो। यद्यपि यो सँधै सजिलो हुँदैन। हामी तपाइँलाई गर्भावस्था को समयमा पढ्न को लागी केहि वाक्यांशहरु दिदैछौं।
यस तरिकाले, तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ वा यदि तपाईं को हुनुहुन्छ भनेर चिन्नुहुन्छ भने, तपाईं शब्दहरू रमाईलो गर्न सक्नुहुनेछ जसले तपाईंलाई राम्रो महसुस गराउँदछ। तपाईं यो सुन्दर चरणको मजा लिनुहुनेछ र त्यहाँ जटिलताहरू हुन सक्छ, तपाईंको मातृत्व वृत्ति पहिले नै जागृत गरिएको छ र सबै कुरा राम्ररी जानको लागि तपाईले के लड्नुहुनेछ।
धेरै व्यक्तिलाई थाहा छ, हामीहरू हामी के सोचिरहेछौं, तसर्थ हाम्रो विचारहरू हाम्रो दिन प्रति दिन आकार दिन्छन्। यसलाई राम्रो शब्दहरूले पोषण गर्न आवश्यक छ ताकि यस तरिकाले तपाईं आफ्नो नयाँ वास्तविकताको अधिक सटीक वा कमसेकम सुन्दर धारणा राख्न सक्नुहुन्छ।
1 शब्दहरूले तपाइँमा ठूलो प्रभाव पार्दछ
2 तपाईं पहिले नै आफ्नो बच्चा संग जोडिएको छ
3 गर्भवती महिला को लागी वाक्यांशहरु
शब्दहरूले तपाइँमा ठूलो प्रभाव पार्दछ
यी वाक्यांशहरूको साथ जुन हामी तपाईंलाई दिन लाग्दछौं, तपाईंले उनीहरूमा भएको क्षमताको र तपाईंले यस सुन्दर चरणमा तपाईं सुरू गरिरहनु भएको महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईं आफ्नो दिमागमा प्रभुत्व जमाउन जान्न सक्नुहुनेछ र ती विचारहरू छनौट गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई वास्तवमै राम्रो महसुस गराउँदछ।
यसको लागि, यी वाक्यहरू पढ्न नहिचकिचाउनुहोस् प्रत्येक पटक तपाईं आफ्नो पेटलाई माया गर्नुहुन्छ, र आफ्नो सानो बच्चालाई तपाईंले उसलाई माया गर्नुहुने सबै कुरा बताउनुहोस्, जुन तपाईं जान्नुहुन्छ कि उहाँ स्वस्थ हुनुहुन्छ र तपाईंले उहाँलाई सबैभन्दा उत्तम जीवन दिन तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा गुमाए बिना: तपाईंको सबै प्रेम।
यो सामान्य कुरा हो कि तपाईं अनिश्चित महसुस गर्नुहुन्छ र डर पनि गर्नुहुन्छ, तर तपाईंले यी डरहरूलाई तपाईंमाथि विजय हासिल गर्न सक्नुहुन्न, राम्रो महसुस गर्न तपाईंले आफ्नो दिमागलाई नियन्त्रण गर्नै पर्छ! यदि तपाईंको गर्भावस्था idyllic, उच्च जोखिम वा केहि जटिलता रहेको छैन ... आशा कहिल्यै गुमाउनु हुँदैन। तपाईको दिमागलाई नियन्त्रण गर्नुहोस् ताकि सबै ठीकठाक होस्।
गर्भावस्था सृजना र जीवन दिनको प्राकृतिक तरीका हो, र यस कारणका लागि, यो हरेक पटक अद्भुत हुन्छ। तपाईले यस चरणको आनन्द लिनुपर्दछ मानसिक शान्तिका साथ र राम्रो भावनाहरूले तपाईंलाई भरिन्छ भावनात्मक कल्याण.
तपाईं पहिले नै आफ्नो बच्चा संग जोडिएको छ
यदि तपाई गर्भवती हुनुहुन्छ भने, तपाईले थाहा पाउनु पर्दछ कि तपाई आफ्नो बच्चासंग जोड्नु भएको क्षणबाट तपाईले थाहा पाउनुभयो कि केहि महिनाहरुमा तपाई आमा बन्नुहुनेछ। त्यसकारण, यी वाक्यांशहरू तपाईंको लागि जति तपाईंको बच्चाको लागि हो। किनभने तपाईले जे महसुस गर्नुहुन्छ, उहाँ पनि महसुस गर्नुहुन्छ। अरु के छ त, जब उसको सुनुवाइ विकसित हुने समय आउँदछ, उसले तपाईंको आवाज पनि सुन्न सक्षम हुनेछ र यसैले, तपाईं यी वाक्यांशहरू ठूलो स्वरले उसलाई पढ्न सक्नुहुन्छ तपाईंको जडान बढाउनको लागि।
कुनै तरिकाले उसलाई थाहा हुन्छ कि तपाईं उसको छेउमा हुनुहुन्छ, र तपाईको विचारहरू हेर्दा पनि तपाई जे गर्नुहुन्छ त्यो उसको लागि हो। उहाँलाई भित्रबाट यी सबै कल्याणकारीहरू देखाउन नहिचकिचाउनुहोस्, र हामी तपाईंलाई विश्वस्त गराउन सक्छौं कि यो, तपाईले यसलाई आफ्नै हतियारमा राख्नु भएपछि यो साकार हुनेछ र यो बढ्न थाल्छ।
गर्भवती महिला को लागी वाक्यांशहरु
यी सबैको लागि, यी वाक्यांशहरू गर्भावस्थाको समयमा पढ्न नबिर्सनुहोस्, किनकि त्यसले तपाईंलाई राम्रो महसुस गराउँदछ र तपाईंको जीवनसँग र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईंले बच्चा दिन जसलाई तपाईं जीवन दिन जाँदै हुनुहुन्छ। तिनीहरूलाई लेख्नुहोस् र तिनीहरूलाई पढ्नुहोस् जब तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ, तपाईं पछुताउनु हुनेछ!
गर्भावस्थामा मेरो पेट मेरो मुटु जत्तिकै महान छ।
जब तपाईं डराउनुहुन्छ वा दु: खी हुनुहुन्छ, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईं आफ्नो बच्चाको अनुहार देख्दा कत्ति खुसी हुनुहुनेछ, तपाईंको सबै डरहरू छोडिनेछ।
मेरो छाला गर्भावस्थाको समयमा पूर्ण लोचको साथ फैलिन्छ, यसैले यसको सबै सुन्दरता बचाईन्छ।
बोसो महसुस नौ महिनासम्म रहन्छ, तर आमा बन्ने आनन्द सधैंभरि रहन्छ।
बधाई छ आमा, तपाईंको जीवनको सब भन्दा ठूलो साहसिक सुरु भएको छ, र बधाई छ प्रिय बच्चा, तपाईं भाग्यमानी महसुस गर्नुहोस् किनकि तपाईं संसारको सबैभन्दा राम्रो आमा हुनुहुन्छ।
उत्तम आमा बन्ने कुनै उपाय छैन, तर असल आमा बन्नको लागि लाख उपायहरू छन्।
तपाईंको बच्चा भित्र बढ्दै जान्छ र तपाईंले एक व्यक्तिको रूपमा यो गर्नुभयो, अबदेखि तपाईंले विश्वलाई बिभिन्न आँखाले देख्नुहुनेछ।
गर्भावस्था को अंक को जीवन को अंक को रूप मा सोच्नुहोस्।
मातृत्वको एक मानवीय प्रभाव छ। यो सबै आवश्यकहरूमा तल आउँछ।
चमत्कार तपाईं मा हुन्छ, स्वर्ग को एक टुक्रा तपाईं भित्र बढ्दै छ, यसको ख्याल राख्नुहोस् किनकि यो तपाईंलाई खुशी र प्रेम के हो देखाउन को लागी हुनेछ।
बच्चालाई संसारमा ल्याउनु भनेको तपाईको ठूलो डर मध्ये एक हुनु हुँदैन तर तपाईको सब भन्दा राम्रो उपलब्धि हो।
कुनै पनि महिलाको जीवनमा गर्भावस्था भन्दा केही बढी माइलस्टोनहरू प्रख्यात छन्।
जीवनमा तपाईले आफ्नो आमा भन्दा राम्रो र अधिक विवादास्पद कोमलता कहिल्यै पाउनुहुनेछ।
कुनै पनि भाषाले आमाको प्रेमको शक्ति, सुन्दरता र बहादुरी व्यक्त गर्न सक्दैन।
मातृत्व भनेको जन्म दिनु भन्दा धेरै हो, यसले पहिले तपाईंको बच्चाको बारेमा सोच्दै छ र त्यसपछि तपाईंको बारेमा, बधाई छ, नयाँ आमा!
अबदेखि त्यो सानो चमत्कारको आनन्द लिनुहोस् जुन तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै खुशीको साथ प्रदान गर्न संसारमा आउँदछ।
हरेक दिन तपाईको गर्भावस्थाको आनन्द लिनुहोस्, महिला, र जब तपाईं पछाडि फर्केर हेर्नुहुन्छ, सृष्टिको आश्चर्यकर्मलाई मुस्कानका साथ सम्झनुहोस्।
के त्यस्तो शक्ति छ जुन तपाईको पेटमा नौ महिना सम्म स्थापना गरिएको छ र तपाईंको जीवनलाई उल्टो बनाउँदछ, कुनै पनि अपेक्षा भन्दा बढि।
आमाको कोखबाट जन्मेको जीवन दुई जीवन सधैंको लागि जोडिन्छ।
एउटी आमाको मुटु गहिरो खाडल हो जुन तल तपाईले सँधै माफी दिनुहुनेछ।
शिशुहरू उनीहरूसँग सँधै समस्याहरू ल्याउँदछन् तपाईंले सोचेभन्दा बढि समस्याहरू ... तर तिनीहरू सोच्ने भन्दा पनि उत्कृष्ट छन्।
बच्चा जन्माउने निर्णय लिनु महत्त्वपूर्ण छ। यो निर्णय गर्दैछ कि तपाईंको मुटु सधैंको लागि तपाईंको शरीरबाट बाहिर जान्छ।
गर्भावस्थामा, महिलाले एकलाई इशारा गर्छिन् जो उनको बाँकी जीवनको लागि प्रेम र समर्पणको सबैभन्दा ध्यान केन्द्रित हुनेछ।
आमा बन्नु कुनै काम होइन। न त यो एक कर्तव्य हो, यो टाढाबाट। यो धेरै अरूमा एक मात्र अधिकार हो।
तपाईंले नौ महिनासम्म आफ्नो गर्भमा बच्चा, तीन वर्षसम्म तपाईंको पाखुरामा, र आफ्नो जीवनभर बाँकी जीवन तपाईंको हृदयमा राख्नुहुन्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्वयं सहायता संसाधनहरू » पुनरावृत्त » वाक्यांशहरू » २ phrases वाक्यांशहरू गर्भावस्थामा पढ्नको लागि